2 Samuel 12 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
12 Jehova wee zie Netan+ ka ọ gakwuru Devid. O wee bịakwute ya+ wee sị ya: “E nwere ndị ikom abụọ nọ n’otu obodo, otu bụ ọgaranya, nke ọzọ bụ onye ọ na-enweghị ka ọ hà ya. 2 Ọgaranya ahụ nwere ọtụtụ atụrụ na ehi;+ 3 ma nwoke ahụ ọ na-enweghị ka ọ hà ya nwere naanị otu nne atụrụ dị nta, nke ọ zụtara azụta.+ Ọ hapụrụ ya ndụ, ọ nọkwa n’ụlọ nwoke ahụ na ụmụ ya na-eto. Ọ na-esokwa ya eri ntakịrị nri ya, ọ na-aṅụ mmiri dị n’iko ya, ọ na-edinakwa n’obi ya, o wee were ya dị ka nwa ya nwaanyị. 4 Mgbe nwa oge gasịrị, ọgaranya ahụ nwere onye ọbịa, ma o sighị n’atụrụ na ehi ya were ụfọdụ gbuoro onye ije ahụ bịara n’ụlọ ya. O wee were obere nne atụrụ nke nwoke ahụ ọ na-enweghị ka ọ hà ya gbuoro nwoke ahụ bịara n’ụlọ ya.”+ 5 Devid wee weso nwoke ahụ iwe dị ọkụ nke ukwuu,+ o wee gwa Netan, sị: “Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ,+ nwoke nke mere ihe a kwesịrị ịnwụ!+ 6 Ọ ga-ejikwa atụrụ anọ+ kwụọ ụgwọ+ obere nne atụrụ ahụ, n’ihi ihe a o mere nakwa n’ihi na o nweghị ọmịiko.”+ 7 Netan wee sị Devid: “Ọ bụ gị bụ nwoke ahụ! Nke a bụ ihe Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru, ‘Ọ bụ m tere gị mmanụ+ ịbụ eze Izrel, ọ bụ m napụtakwara+ gị n’aka Sọl. 8 Eji m obi m nye gị ụlọ onyenwe gị,+ nye gị ndị nwunye onyenwe+ gị ịdabere n’obi gị, nyekwa gị ụlọ Izrel na nke Juda.+ A sịkwa na o zughị, m dị njikere ịtụkwasịrị gị ihe ndị a na ihe ndị ọzọ.+ 9 Gịnị mere i ji leghara okwu Jehova anya site n’ime ihe jọrọ njọ+ n’anya ya? I ji mma agha gbuo Yuraya onye Het,+ i wee kpọrọ nwunye ya ka ọ bụrụ nwunye gị,+ ma i ji mma agha nke ụmụ Amọn gbuo ya. 10 Ugbu a, mma agha+ agaghị apụ apụ n’ụlọ gị ruo mgbe a na-akaghị aka,+ n’ihi na i ledara m anya wee kpọrọ nwunye Yuraya onye Het ka ọ bụrụ nwunye gị.’ 11 Nke a bụ ihe Jehova kwuru, ‘Lee, m ga-eme ka ọdachi si n’ụlọ gị dakwasị gị;+ m ga-akpọrọkwa ndị nwunye gị n’ihu gị kpọnye nwoke ibe gị,+ ọ ga-edinakwa ndị nwunye gị n’ihu anyanwụ a.+ 12 Ọ bụ ezie na gị onwe gị mere ya na nzuzo,+ mụ onwe m ga-eme ihe a n’ihu Izrel+ dum nakwa n’ihu anyanwụ.’”+ 13 Devid wee sị+ Netan: “Emehiewo m Jehova.”+ Netan wee sị Devid: “Jehova emewokwa ka mmehie gị gabiga.+ Ị gaghị anwụ.+ 14 Ka o sina dị, ebe ọ bụ na i lelịwo Jehova+ site n’ime ihe a, nwa nwoke ahụ a ka mụụrụ gị ga-anwụrịrị.”+ 15 Netan wee laa n’ụlọ ya. Jehova wee tie nwa ahụ nwunye Yuraya mụụrụ Devid ihe otiti,+ o wee daa ọrịa. 16 Devid wee malite ịchọ ezi Chineke n’ihi nwatakịrị ahụ. Devid wee malite ibu ọnụ.+ Ọ batakwara wee dinara n’ala nkịtị n’abalị ahụ dum.+ 17 Ndị okenye ụlọ ya wee bilie guzoro n’akụkụ ya ka ha kulite ya, ma o kweghị, o soghịkwa ha rie nri.+ 18 O wee ruo n’ụbọchị nke asaa na nwa ahụ nwụrụ. Ndị na-ejere Devid ozi wee tụọ egwu ịgwa ya na nwa ahụ anwụwo; n’ihi na ha sịrị: “Lee! Mgbe nwa ahụ nọ ndụ, anyị gwara ya okwu, ma o geghị ntị n’olu anyị; oleezi otú anyị ga-esi asị ya, ‘Nwa ahụ anwụọla’? Ọ ga-eme ihe dị njọ.” 19 Mgbe Devid hụrụ ka ndị na-ejere ya ozi nọ na-atakwunyere ibe ha okwu, Devid malitere ịghọta na nwa ahụ anwụọla. Devid wee jụọ ndị na-ejere ya ozi, sị: “Nwa ahụ ọ̀ nwụọla?” Ha wee zaa, sị: “Ọ nwụọla.” 20 Devid wee si n’ala bilie, saa ahụ́, tee+ mmanụ ma gbanwee ákwà mgbokwasị ya wee bịa n’ụlọ+ Jehova kpọọ isiala;+ e mesịa, ọ batara n’ụlọ ya wee kwuo ka e nye ya nri, ha wee debe nri n’ihu ya ngwa ngwa, o wee malite iri ya. 21 Ndị na-ejere ya ozi wee sị ya: “Gịnị ka ihe a i mere pụtara? Mgbe nwa ahụ nọ ndụ, i buru ọnụ ma na-akwa ákwá n’ihi ya; ma ngwa ngwa nwa ahụ nwụrụ, i biliri malite iri nri.” 22 O wee sị: “Mgbe nwa ahụ ka nọ ndụ, m buru ọnụ+ ma na-akwa ákwá,+ n’ihi na m sịrị n’obi m, ‘Ònye maara ma Jehova ọ̀ ga-emere m amara, nwa ahụ adị ndụ?’+ 23 Ugbu a ọ nwụrụ, gịnịzi mere m ga-eji na-ebu ọnụ? M̀ nwere ike ịkpọghachite ya?+ M ga-agakwuru ya,+ ma ya onwe ya agaghị alọghachikwute m.”+ 24 Devid wee malite ịkasi Bat-shiba nwunye ya obi.+ Ọzọ, ọ bakwuuru ya, ya na ya wee dinaa. Ka oge na-aga, ọ mụrụ nwa nwoke,+ e wee gụọ ya Sọlọmọn.+ Jehova hụkwara ya n’anya.+ 25 O wee zie ozi site n’ọnụ Netan+ onye amụma wee gụọ ya Jedidaya, maka Jehova. 26 Joab+ nọ na-ebuso Raba+ nke ụmụ Amọn agha wee weghara isi obodo nke alaeze ahụ. 27 Joab wee zigara Devid ndị ozi, sị: “Ebusowo m Raba+ agha. Ewegharawokwa m obodo mmiri.* 28 Ugbu a, kpọkọta ndị fọdụrụ, maa ụlọikwuu, busokwa obodo ahụ agha ma weghara ya; ka ọ ghara ịbụ m ga-eweghara obodo ahụ, ka a gharakwa ịkpọkwasị ya aha m.” 29 Devid wee kpọkọta ndị agha niile wee gaa Raba buso ya agha wee weghara ya. 30 O wee kpupụ okpueze dị Malkam n’isi,+ nke ịdị arọ ya dị otu talent ọlaedo, tinyekwara nkume ndị dị oké ọnụ ahịa; Devid wee kpuru ya. Ihe ndị a kwatara+ n’obodo ahụ, bụ́ ndị o bupụtara, dị nnọọ ukwuu. 31 O wee kpọpụta ndị bi n’ime ya ka o wee nye ha ọrụ ịwa nkume nakwa iji ngwá ọrụ na-aghọ nkọ ndị e ji ígwè mee+ na anyụike na-arụ ọrụ, o mekwara ka ha na-akpụ brik. Ọ bụkwa otú ahụ ka o mere obodo niile nke ụmụ Amọn. N’ikpeazụ, Devid na ndị niile ya na ha so laghachiri Jeruselem.
Ikekwe, ebe obodo ahụ si enweta mmiri.